LifePage Career Talks - Izinhlelo zokusebenza ku-Google Play
Umsebenzi Wakho Uyisinqumo esibaluleke kakhulu sempilo yakho futhi uma ungaqiniseki nge-100% yemisebenzi yakho yeCustomer lapho uthola khona uhlelo lokusebenza olufanele.
I-LifePage iyiplatifomu yokuqwashisa ebaluleke kunazo zonke emhlabeni ebhekwe ngabanakekeli. Usebenzisa, i-LifePage ungafika esinqumweni se-Career ngezinyathelo ezintathu:
[Isinyathelo 1] Funda: Ochwepheshe Bangempela. Imibono Ethembekile
Ukuqondiswa Komsebenzi Ojwayelekile kusebenza kwimodeli yokweluleka. Okokuthi, uMeluleki noma iphaneli linikezela ngemininingwane ngemisebenzi ehlukahlukene. Njengoba imininingwane ingeyesibili, le modeli isisebenzile ezweni lanamuhla eliqhutshwa yiGoogle.
Usebenzisa iLifePage, ufunda ngoMthetho kuMmeli wangempela. Lolu lwazi oluyinhloko oluvela emlonyeni wehhashi. Ukhona yini umuntu ongachaza ukuthi ukuphoyisa kungcono kunesikhulu samaphoyisa sangempela? Yini enye? Asinawo amaPhoyinti amaningi ku-LifePage.
Ngezinkulumo Zomsebenzi eziyi-1,200+ - i-LifePage ilwazi olugcwele kunabo bonke lweMisebenzi emhlabeni wonke.
[Isinyathelo 2] Hlaziya: Ukuqwashisa ngokusekelwe ekuziHlolweni kwe-Self
Abaluleki kanye nokuhlolwa kwe-Psychometric kubheka ngaphakathi kuwe ukuthola izintshisekelo zakho. Kepha, bangakuthola kanjani, uma ungakaze uvezwe kulokho okuzokuhambela kahle?
Kusetshenziswa i-LifePage, usitshela ukuthi uthanda kangakanani lokho okuqondile nge-Umsebenzi. I-algorithm yethu ibala i-Dream Index ekhombisa ithuba lakho lokuphumelela kukho.
Ukubuka noma ikuphi ukukhuluma nge-Worker on App kukhululekile futhi i-Self Assessment kunoma iyiphi i-Career Talk imane ₹ 100.
[Isinyathelo 3] Hlaziya: Impilo yami… Umsebenzi Wami… Isinqumo sami
Abantu abasondele kuwe, bakufisela okuhle kodwa uma ungazibambi ngokulawula impilo yakho bese begcina bekuthathela izinqumo ze-Career.
Usebenzisa i-LifePage, ungathatha ukulawula. Vele ubheke kahle i-Dream Index Report yakho futhi ngokwakho uzokwazi okulungele wena.
I-LifePage iyithuluzi elimangazayo lokuzicabangela wena siqu nabasebenzisi abangaphezu kuka-1,40,000 emhlabeni wonke.
Ukuqala ukusebenzisa i-LifePage
1) Landa i-App
2) Bhalisa i-akhawunti yakho ye-LifePage nge (Igama, Ukuqanjwa, Inhlangano, I-imeyili, Inombolo Yeselula ne-PIN)
3) Yenza kusebenze i-akhawunti yakho ye-LifePage (ngokuchofoza kusixhumanisi esithunyelwe kuwe ngemuva kwesinyathelo 2)
4) Ngena usebenzisa inombolo yakho yeselula nephinikhodi
Qaphela: Uma uku-WhatsApp ngenombolo yakho ebhalisiwe, sizokuthumela umyalezo owamukelekayo. Uma udinga noma yiluphi usizo ungasicela lapho.
Ngokungeziwe ku-LifePage Career Talks App, sinikeza uhlelo lokuqondisa olwenziwe ngamahora ayi-14 olubizwa nge-Career Plan. Umeluleki Wokunakekela Ozinikele uzosebenza nawe ukubhala:
1) Yikuphi Umsebenzi ongcono kakhulu kuwe
2) Kuyini Ukufaneleka kweKhono lakho olukhethiwe
3) Ngabe uzophumelela kanjani eMsebenzini okhethiwe
Imininingwane engaphezulu ku: https://www.lifepage.in/plan.php
Silangazelela ukukusiza ngesinqumo esibaluleke kakhulu sempilo yakho.
Khumbula: Impilo yami… Umsebenzi Wami… Isinqumo sami
Thuthukisa, ukuthuthukisa kanye ngcono ubuntu bakho nge amathiphu pro, ukuqeqeshwa & izingcaphuno
Lolu hlelo lokusebenza luzokusiza ukuba ukhwele izinga lezemisebenzi!
Xhuma nosomabhizinisi, abadali, ama-freelancers, nabatshalizimali.
Lalela I-Book Insights nama-Podcasts futhi ube ngcono kuwe nsuku zonke!
Imishwana edumile, izinkulumo nezisho zesichazamazwi. Akukho ukubhalisa, isebenza ungaxhunyiwe ku-inthanethi.